Libanguliwe iva lomphakathi wasOlundi ngomgwaqo – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Libanguliwe iva lomphakathi wasOlundi ngomgwaqo
Ubukhosi News February 1, 2018
Uqalile ukulungiswa umgwaqo elokishini Olundi
UKHALE kwezwakala umphakathi wasOlundi ngemigodigodi egcwele emigwaqeni elokishini okubalwa isigceme kwa-A, C, D naseB-North elimaza izimoto idale nezingozi.
Emveni kokuthi iBAYEDE ibhale ngalolu daba ngeledlule uMkhandlu wasOlundi ube usujuba ithimba labasebenzi bakaMasipala layolungisa umgwaqo Izinyosi okuyiwona osulimele kakhulu.
Kukhale ipiki nefosholo abasebenzi belungisa lo mgwaqo obese kunesikhathi kukhalwa ngawo kwaphinde kwagxekwa noMkhandlu ukuthi awuyinakile eyokulungisa imigwaqo emalokishini.
IKhansela kuWadi 12 uMnu uThokozani Mkhize ukuqinisekisile ukulungiswa kwalo mgwaqo. Ngeledlule odabeni olwalubhalwe elaboHlanga lakuveza ukuthi le nkinga yomgwaqo okukhulunywa ngawo oseB North kwaqhuma ipayipi lamanzi ngaphansi kwawo. Uthe uMkhandlu wesiFunda iZululand wawubikela ngalolu daba waveza nokuthi unazo izinhlelo zokulungiswa kwemigwaqo emalokishini ezihamba ngokwezigaba zayo. “Kunohlelo lokugugula imigwaqo iqalwe kabusha ikakhulukazi edolobheni lasOlundi neminye imigwaqo naseB North esabelweni semali sowezi-2018/19. La maphrojekthi engikhuluma ngawo azoqala uma kuqala inyanga uNtulikazi kulo nyaka,” kuchaza uMkhize obe esenxusa amalungu omphakathi ukuthi ehlise umoya njengoba kusazoqhubeka ukuthi imbiwe le migwaqo ikakhulukazi leyo ethintekayo okuhamba kuyo ipayipi lamanzi elikhulu kule ndawo iB North. Kukhona nomgwaqo iPrincess Magogo ongaphakathi edolobheni izinhlelo zokulungiswa kwawo eziqhubekayo njengoba usadwetshwa izimpawu kufakwa nezithibajubane.
Ngesikhathi elaboHlanga lulandela izikhalo zomphakathi ngengwadla yokugqoza kokulethwa kwezidingo, lithole ukuthi sekuphele iminyaka emithathu umphakathi uphila ngaphansi kwalolu sizo.
Amalungu omphakathi athi abehlala efela ngaphakathi esaba ukukhuluma ngezindaba ezithinta uMasipala ngenxa yokwesabela ukuphepha kwawo.
Okunye akuvezile ukuthi bekuzobukeka sengathi udelela iqembu eliphethe nokuthi abahloniphi. Umphakathi uthi ubona ubuyelwa ithemba njengoba ziningi obukhala bakhala ngazo kodwa ungakwazi ukuphumela obala uziveze.
Ilungu lomphakathi elalihlabe umkhosi libonge ukungenelela kweBAYEDE ngokuthi ibhale lolu daba kuze kube khona okwenzekayo ngokushesha. “Ukwehluleka kwethu ukunqoba izimpi esisuke sibhekene nazo yingoba sisuke sithule singakhulumi ngezinto ezisehlelayo emiphakathini yethu. Ngalawo mazwi ngifisa ukubonga uMasipala wethu wasOlundi ngokusukumela phezulu udaba lomgwaqo obunenkinga. Lokhu kuyakhombisa ukuthi kuningi okungenzeka Olundi nazo zonke izindawo zasemakhaya uma nje abantu bengayeka ukwenziwa izinkomo ezisiwa le nale.”
Indawo yasOlundi yaziwa njengendawo yamagugu edume umhlaba wonke ngempi yamaNgisi ehlasela isigodlo seNkosi uCetshwayo. Lokhu kudala ukuthi izivakashi zitheleke ngobuningi zizoncela ulwazi nomlando ngamagugu esizwe samaZulu nakho konke okwenzeka emlandweni wawo. Udaba lokungahambi kahle kokuthuthukiswa kwedolobha kudala isithombe esibi kubavakashi nabatshalizimali. Ingxenye yelokishi iB North ithathwa ngokuthi iyona ephucuzekile kukhona nezindawo zokulala, okuyizo ezifaka umnotho omkhulu kule ndawo.
IMeya yasOlundi uMnu uWilson Ntshangase ikuqinisekisile ukuthi bakusukumele ukulungisa umgwaqo obunenkinga.
“Asikucacise ukuthi imigwaqo yasOlundi isimdala, okwenza ukuthi igubheke. Imali yokuyilungisa asinayo njengoMkhandlu yingakho uma kunezinkinga ezifana nalezi kumele sifake izicelo zesibonelelo kuHulumeni. UMnyango kaMgcinimafa yiwo esiyaye sicele kuwo bese sikwazi ukuthi senze lezo zidingo zomphakathi, yiwo futhi oyilandelelayo leyo nkece ukuthi isebenze kanjani,” kusho uNtshangase
Uthe isimo asisibi kangako njengoba kukhona okuhle okwenzekayo Olundi. “Kuzoba nentuthuko yokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo entsha ezokwenza kunciphe isiphithiphithi edolobheni kuthuthwe nerenke yamatekisi endawo.”
Bawotha ubomvu e-Adams ngodaba lomhlaba